Alaabada iyo DIY, sida loo sameeyo alaab aad ku ciyaarto - Ikkaro
Alaabta carruurtu ku ciyaaraan ayaa ah waxyaabaha ugu waaweyn ee carruurtu wax ku barato. Qof kastaa wuxuu ku barbaaraa alaabada ay ku ciyaaraan, xitaa waddamada aan lahayn ilaha, halkaas oo haddii aanu lahayn alaab-tooyada, lagu sameeyo wax kasta oo ay heli karaan.
Fikradda ah inaad tijaabiso 'DIY' ee alaabada lagu ciyaaro ama sida loo sameeyo alaab-tooyada laf ahaantaadu waxay timid maalintii aan ogaaday shaqada Arvind gupta 6 sano kahor, hadal TED ah. Hindisahaan Hindida ah wuxuu u heellan yahay sameynta iyo naqshadeynta alaabta carruurtu ku ciyaarto ee qalabka dib loo rogay dhaxalkiisuna waa mid cajiib ah.
At Ikkaro si gaar ah ugama jeedo mowduucan, laakiin naqshadeynta alaabta carruurtu ku ciyaaraan ee guryaha lagu sameeyo, dib loo warshadeeyo oo si fudud loo heli karo ayaa ah wax aad u soo jiidasho leh oo aan doonayo inaan si qoto dheer uga hadlo.
Haddii Arvind dhaho:
Waxa ugu fiican ee ilmuhu ku samayn karo alaabta uu ku ciyaaro ayaa ah inuu jebiyo
Waxaan ku dari lahaa intaas marka laga soo tago jabintooda, iyaga ka dhig. Isaga ha soo saaro. Waa waddo loo maro is-barasho, dhiirigelin iyo hal-abuur.
Waxaan xasuustaa markii aan yaraa, wax kasta oo aan ku samayn jiray warqad, kartoonno, ulo, dhagxaan iyo qaybo ka mid ah waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaarto toys
Dhibaatada ugu weyn ee illaa iyo hadda aan ka helay robotka 'LEGO Boost robot' ayaa ah inay ku xiran tahay aaladda (kiniin ama taleefan casri ah) ... Akhri akhriska
Sidee loo sameeyaa dusha sare wareega CD-ga
Waxaan u soconaa ka samayso dusha sare qalabka guryaha dib u habeyn lagu sameeyo. Xaaladdan oo kale waxaan u isticmaali doonnaa CD-yada duugga ah ama DVD-yada aan waxtar lahayn. Waa waxqabad lala sameeyo carruurta. Si wanaagsan carruurteenna, ama aqoon isweydaarsi dugsiga, dugsiga xagaaga, iwm.
Waxqabadka waxaan uga faa'iideysan karnaa waxyaabo badan, sharrax waxa a gyroscope iyo howlaha iyo yutiilitida ee ay leedahay ama hadii ay yar yihiin, waxaan bari karnaa inay isticmaalaan jiheeyaha, jarista iyo dib u warshadaynta qalabka. Maaha a nooca wareejinta :) laakiin inkasta oo taas aan la yaabay nooca marmarka ah ee aan wareegayo wax ka badan 1'30 »
Maqaalka waxaa loo kala saaray laba qaybood oo ah laba dariiqo oo lagu dhiso dusha sare ee wareegga. Qeybta ugu horeysa uguna fudud 3da qaybood ayaa loo isticmaalaa, CD / DVD, marmar iyo fiilo. Midda labaad waa dhisme duug ah oo ku saleysnaa maqaal Instructables oo xoogaa ka sii adag in la sameeyo. aan badnayn, laakiin aan ku habboonayn carruurta yaryar.
Waxaan isku dayay inaan sameeyo video ;-)
WareegyadaCiyaarahaas sheydaanka ee carruurta oo dhan wada iyo kuwa waalan ee in muddo ah qaybtaan (oo xitaa macallimiinta ka sii waalan) ayaa iyaguna gaadhay Ikkaro. Waxay ka kooban yihiin jidh, badiyaa ka samaysan bir ama caag, oo ku dheggan meel dhexe oo ay ku wareegaan. Dhaqdhaqaaqan, sabab uun ayaan u jecel nahay.
Waxay ballanqaadayaan inay caawiyaan ADHD, hagaajinta feejignaanta, yareynta culeyska fekerka, iwm. Waxay awood u yeesheen inay galaan liiska 20ka alaab ee ugu iibinta badan Amazon. Qandhada 'Spinner fever' ayaa ka yaabisay qof walba. Waxay xitaa leeyihiin a kanaalka ku yaal Reddit halkaas oo aan ka heli doonno macluumaad badan oo xiiso badan.
Waxyaabaha lagu ciyaaro carruurta ee guriga lagu ciyaaro oo lagu raaxeysto
Safka qaar alaabada lagu ciyaaro iyo mashaariicda in aan ka soo tagnay markaa waxaad ku qaban kartaa adiga farcankaaga waanu ka tagnay tan toy ah wareegaya.
Runtii waa fududahay laakiin taasi waxay kaa dhigi kartaa inaad waqti wacan la qaadataan carruurtaada ama wiilashaada.
Natiijada aakhirka waa sidan.
Ma aqaano in toy-kani uu magac leeyahay, laakiin waa ku habboon tahay in lagu sameeyo kuwa yaryar ee guriga ku jira.
Waa wax aad u fudud waana hubaal inay ku raaxeysan doonaan sameysashada tooy ay iyagu leeyihiin.
Fiidiyowga waxaad ku arki kartaa sida ay u shaqeyso iyo saameynta ay ku yeelato.
Tiknoolajiyad ku dhex jirta ukunta nooca jilicsan
ka Ukunta yaabina Iyagu waa kiniinnada yaryar ee soo saara ilmaha ee aan ku sii wadno inaan ku qaadno gudaha.
Mar kasta oo aan arko mid Waxaan rajeynayaa inaysan jirin dollWaxaan rabaa wax la isku soo uruuriyo oo kii naqshadeeyay toy-ga qoraalkan dhiirrigeliyay ayaa mudan hambalyo.
Sida loo sameeyo alaabada lagu ciyaaro tuubooyinka PVC
Weligaa ma fikirtay u isticmaal tuubooyin PCV ah meccano si aad ugu dhisto waxyaabaha aad ku ciyaarto?
Hagaag, waxaan kuu daynaynaa tusaalooyin ka mid ah waxa la gaari karo.
Waxaas oo dhan waxaan ku dari karnaa seefo, talis, bastoolado, miisas, iwm.
Sawir gacmeed xirfadeed
Waxaa jira siyaabo badan oo loo sameeyo slingshots maalin maalmaha ka mid ah waxaan ka hadli doonaa sida loo sameeyo dharbaaxo guriga lagu sameeyo. Markii aan ka hadlayo dharbaaxada xirfadeed ... Akhri akhriska